Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica Usihlalo weNtlanganiso yeQela eliSebenzayo lokuBuyisa uKhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Ukwaphula Iindaba zeJamaica » Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica Usihlalo weNtlanganiso yeQela eliSebenzayo lokuBuyisa uKhenketho
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba zeJamaica • Caribbean • Ukubambisa • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Ukhenketho lwaseJamaica UMphathiswa Hon. U-Edmund Bartlett izolo ubambe intlanganiso yesithathu yeQela eliSebenzayo leMibutho yaseMelika (i-OAS) eliqhuba ngoku isicwangciso sokubuyisela ukhenketho, ukuze kubuyiselwe amashishini eenqanawa kunye neenqwelomoya, ezichaphazeleke kakubi yi-COVID- 19 ubhubhane.
"Ukubuyisela kwimeko yesiqhelo kufuneka kugxile ekuthatheni amanyathelo okomelela, kubandakanya nezicwangciso zexesha elide zophuhliso lwesizwe, kunye nokuyila izicwangciso zobuchule zokuphucula ukomelela kula mashishini nakwicandelo elibanzi lokuhamba nokhenketho," utshilo uBartlett.
Ukwabelane ngesicwangciso esinezinyathelo ezi-3, esasiquka ukuqinisekisa ukuba amashishini ayayithobela imithetho; ukubuyisela ukuzithemba kwabathengi ekutsaleni imakethi entsha yeGeneration C (Gen C); kunye nokwandisa ukwabelana kwetekhnoloji kunye nolwazi kwimida yonke.
Ecacisa ngesicwangciso-qhinga seendawo ekuya kuzo, iinqwelomoya kunye nohambo ngenqanawa ukuze zihambisane nomgaqo kwaye zikulungele ukwamkela abathengi, uMphathiswa uBartlett uthe, "Kukho amathuba, nangona kukho umahluko ekusebenzeni nasekufikeni, kwezolungelelwaniso lweenkqubo ezisebenzayo zesayensi ezibuyisela ukhuseleko. , ukhuseleko nokungabinamthungo ekuhambeni nasekuhlaleni kwabakhenkethi. ”
Uqwalasele ukuba nje ukuba amashishini athobela umthetho, kufuneka ukuba kwenziwe iinkqubo zokuthengisa ezomeleleyo.
“Amaphulo okuthengisa acwangciswe ngobuchule kunye novakalelo ukuvuma utshintsho lwehlabathi kunye nokubonelela ngophunyuko olufunekayo kuya kuba yinto ephambili… Izivumelwano kunye namalungiselelo endawo ezininzi anokuphinda asetyenziswe ukubonelela ngexabiso ngakumbi kumhambi, ngakumbi abahambi abasuka kwiindawo ezikude. kuthathelwe ingqalelo, ”utshilo.
Iqela elisebenzayo lelinye lezine, ezabhengezwa ngexesha leseshoni yesibini ekhethekileyo yoMbutho waseMelika (i-OAS) yeKomiti yeMelika yoKhenketho (i-CITUR) ebibanjwe nge-14 ka-Agasti ka-2020, ukuququzelela ukubuyela kwimeko yesiqhelo nangexesha elifanelekileyo amacandelo ezokhenketho.
Intlanganiso yokuqala yeqela iBartlett-Chaired yenzeka nge-10 kaDisemba ngo-2020 nabameli abavela kwimibutho eyahlukeneyo yamazwe kunye namazwe akummandla, kubandakanya iChile, iColombia, iEcuador, iEl Salvador, iGuyana, iHonduras, iPeru kunye neSt. Vincent kunye neGrenadines .
Umbutho wamazwe aseMelika yiforamu yengingqi yenkulumbuso yengxoxo zopolitiko, uhlalutyo lomgaqo-nkqubo kunye nokwenza izigqibo kwimicimbi yeNtshona yeHlabathi. Ibuyela kwiNkomfa yokuqala yaMazwe ngaMazwe yaseMelika, eyayibanjelwe eWashington, DC, ukusukela ngo-Okthobha u-1889 ukuya ku-Epreli 1890.
I-India ifuna igalelo kuKhenketho lwasemaPhandleni, uKhenketho lwezoNyango ...
U-Boris Johnson: Akukho kuphumla kwangoko kwe-COVID-19 ...
Yintoni iNkulumbuso ebambeleyo yase-Eswatini ...
Jonga ukuKhangela kwesikhululo senqwelomoya saseFrankfurt